Dagaal xoogan oo Ciidamada Dowlada Iyo Amisom oo isgarabsanaya iyo Xoogaga Alshabaab ku Dhexmaray Duleedka Jowhar | HobyoNet.Com
Dagaal xoogan oo Ciidamada Dowlada Iyo Amisom oo isgarabsanaya iyo Xoogaga Alshabaab ku Dhexmaray Duleedka Jowhar
JOWHAR-HOBYONET) Wararka ka imaanya gobalka Shbeelaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay weerar xoogan ay ku qaadeen magaalada Jowhar.
Wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM oo ku sii jeeda halkaasi ay wadada u galaeen dagaalyahanada Al-Shabaab waxaana ilaa Maqribnimadii uu dagaal xoogan ka socdaa duleedka magaalada Jowhar.
Inkastoo dadka ku dhaqan Jowhar ay cabsanayaan hadana waxaa lasoo warinayaa in dagaalka uu xoogiisa deegaanka Booroor oo todobo KM qiyaastii ujirta magaalada waxaana la maqlayaa rasaas xoogan oo labada dhinac ay is weydaarsanayaan.
Idaacadii shabaabku lahayd ee Andalus fadhigeedana uu ahaa magaalada Jowhar ayaa hawada ka baxday waxaana lagu soo waramayaa in xaaladu tahay mid aan laga sheekeyn karin.
Ilaa iyo iminka majirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha dowlada Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab oo ku aadan dagaalkaan haatan ka socda meel ku dhow magaalada Jowhar balse Warar hoose oo Laga Helayo Ilo xog ogaala ayaa Sheegaya in Ciidamada Huwanta ku Sii Siqayaan Magaalada Jowhar inkastoo ay Jiraan Iska cabin Xoogan oo Kaga imaanaysa Xarakada Alshabaab oo Gacanta ku Haya Magaalada xarunta u ah Gobolka Sh/dhexe ee Jowhar.
Xafiiska Wararka Hobyonet.com Muqdisho
Kala Xiriir wadanka17@gmail.com